Soo dejisan Proteus 8.9.28501 – Vessoft
WindowsSawireynta iyo qaabeyntaCAD & 3D-qaabayntaProteus
Qeybta: CAD & 3D-qaabaynta
Bogga rasmiga ah: Proteus
Proteus – qalab si aad ugu qorshayso iyo reserved qalabka elegtarooniga ah, kaas oo ku salaysan yihiin microcontroller ee kala duwan ee qoysaska kala duwan. Software wuxuu kuu ogol yahay in aan soo bandhigno Bannaankii in Tifaftiraha graphic, qaabeeyaan ay howlgal iyo horumarinta guddiga circuit daabacay, oo ay ku jiraan muuqaalaynta saddex geesood ah. Proteus waxay bixisaa taageero ah ee uunsiga udgoon lagu daydo, kuwaas oo inta badan la siiyey ay saarayaasha ee elektarooniga ah. Software ayaa sidoo kale la jaan qaada tiro badan oo lagu daydo qalab digital iyo analog. Proteus u ogolaanaya in ay qabtaan imtixaanka khalad suurto gal dhamaadka hawshiisa u talin jiray guddiga.
Waxay abuurtaa gooldhalinta ee ah editor naqshadeynta
Taageerada ee uunsiga udgoon lagu daydo
La jaan qaada tiro badan oo qalab
Baarista khaladaadka suurto gal
Soo dejisan Proteus
Faallo ku saabsan Proteus
Proteus Xirfadaha la xiriira
Software ee lagula socdo ee walxaha ku jira qiyaas 3D. User waxay leedahay fursado ah in la dhiso qaybaha kala duwan in ay mashaariic isaga u gaar ah.
Tani waa sawir sawir oo taageera qaabab caan ah, tifaftiraha aasaasiga ah, raadinta muuqaalka sawirada iyo sawirada.
Krita – tifaftire garaafyo muuqaallo leh oo awood leh si ay ula shaqeyso rinjiyeynta dhijitaalka ah. Softiweerku wuxuu leeyahay qalab badan iyo astaamo lagu abuuro farshaxan gacmeed.
eM Macmiilka – macmiilka iimaylka si uu u maareeyo xisaabaadka badan, ee la macaamila adeegyada emaylka ugu weyn isla markaana la yimaada astaamo waxtar leh.
Software ayaa si aad u eegto warbixinta buuxda oo ku saabsan qaabka file ah disk adag iyo niyad san meel disk ah. Software waxay bixisaa dhawr qoraal kala duwan si ay u soo bandhigaan qaab-dhismeedka content ku disk ah.
Clementine – waa ciyaartooy ku habboon in dib loogu laabto qaababkii caanka ahaa. Softiweerku wuxuu kuu ogolaanayaa inaad nuqul ka sameysato muusikada aaladda la qaadan karo oo aad dhageysato adeegyada raadiyeyaasha caanka ah.